ရဲဝံ့သူတို့အတွက် လက်ခုပ်သံ … – PVTV Myanmar
စစ်သည်တွေ ပြည်သူ့ဘက်မှာ ပြောင်းလဲရပ်တည်တဲ့အခါ သူတို့ အန္တရယ်များစွာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ နိုင်ငံ့အရေး အရေးကြီး‌နေတဲ့ အခုလိုကာလမှာ သူတို့ရဲ့ ရဲ့ရင့်စွန့်စားမှုက အရေးပါတဲ့ အင်အားတရပ်ပါ။ ပြည်သူတွေရဲ့ လက်ခုတ်သံတွေနဲ့ ပြည့်သူ့ဘက်တော်သား စစ်သည်တွေကို အားပေးလိုက်ကြရအောင်။
#ClapForCourage ဆိုတဲ့ # လေးနဲ့အတူ လက်ခုပ်သံဗွီဒီယိုတွေကို ကောမန့်ထဲကို ပို့ပေးပါခင်ဗျာ။
Our brave brothers and sisters are riskingalot when they change to the people’s side. Their courage is most important in these crucial times. Let them hear your support with claps. Send your #ClapForCourage videos in the comments below.